Maxamed Dheere oo isku dayey xubnaha dowladda ee jooga Jowhar in uu ka ceyrio magaladda Jowhar, balse taasi ay ka diiday Dowladda Ethiopia.
Buluugleey August 25, 2005
Maxamed Cumar Xabeeb (Maxamed Dheere), oo ah Guddoomiyaha maamulka qeybo ka mid ah Gobolka Shabeelaha Dhexe ayaa si awood ah u muujiyay in dowladda FKMG Soomaliya qeybta joogta Jowhar in ay isaga marti u tahay ka dib markii habeenimadii Axadda uu ku wargeliyay xubnahaasi in ay isaga baxaan Jowhar.
Arintan handaada ah ee uu ku dhowaaqay Maxamed Dheere ayaa timid, ka dib markii loo sheegay in saraakiiisha Booliska ee tababarka u aaday dalka Uganda oo ah kuwa guud ahaan laga soo kala xulay gobolada dalka in magaalada Jowhar loo qoondeeyay labo sarkaal oo keliya inay uga qeybqaataan tababarkaasi ,taasoo uu ka carooday kuna dhawaaqay in loo baahnaa in tirada la qoresheeyay ee 60-ka sarkaal ee tababarka loogu diray dalka Uganda, kala bar loo baahnaa inay noqdaan saraakiisha Jowhar ka soo jeeda ama ay waajib aheed in isaga laftigiis uu dajiyo qorshaha saraakiishaasi loogu diray waddanka Uganda.
Hadalkan ayuu ku hadlay Maxamed Dheere, iyada oo uusan xubin ka aheyn labadda Gole ee DFKMG Soomaaliya.
Xubno ka tirsan labada gole ee Dowladda FS oo ku sugan Magaalada Jowhar kana gaabsaday in magacooda la shaaciyo ayaa xaqiijiyay in Maxamed Dheere uu arintaasi darteed ugu tagay Xuseen Ceelaabe Faahiye oo imminka ah Kusimaha R/wasaaraha kuna wargeliyay fariintiisa ah in xubnaha Dowladda ay gabi ahaan isaga guuraan Magaalada Jowhar sida ugu dhaqsiyaha badan iyada oo Maxamed Dheere uu fariintaasi gaarsiiyay Xuseen Ceelaabe Fahiye habeenimadii Axada xilli saacaddu ay aheed sideed saac habeenimo.
Ilaha laga helay warkan sii sheegaya in Kusimaha R/wasaaraha Xuseen Ceelaabe Faahiye isna uu arintaasi xiriir Telefon durbadiiba kula xiriiray R/wasaare Geedi oo xilligaasi ku sugnaa Magaalada Nairobi una sheegay amarada ka soo baxay Maxamed Dheere ee ceyrinta Xubnaha Dowlada ee ku sugan Jowhar taasoo uu sheegay in si degdeg ah loogu baahanyahay in xal loogu helo.
Warka ayaa waxaa uu intaasi ku darayaa in R/wasaare Geedi oo aan arintaasi wadahadal kala sameyn Maxamed dheere uu soo farageliyay Safiirka Ethiopia ee arimaha Soomaaliya Cabdicasiis Axmed Aadan oo lagu wargeliyay amarada adag ee ka soo baxay Maxamed Dheere.
Safiirka Ethiopia u qaabilsan arimaha Soomaaliya ayaa telefon kula soo xiriiray Maxamed dheere kuna wargeliyay in xubnaha labada gole ee Dowladda FS ee ku sugan Jowhar ay yihiin dad Dowladda Ethiopia marti u ah Jowharna ay sidaa ku joogaan wixii qalad ah ee ay galeena loo baahan yahay in la saxo ee aan loo soo ceyrin sidaasina markii dambe uu ku qancay Maxamed Dheere kuna ogolaaday in ay dowladda sii joogto Jowhar.
Golaha Barlamaanka ee ku sugan magaalada Jowhar ayaa ahayn welwelka haysta aanan ku sugneyn arrintan keliya ee waxaa u wehliya faragelinta tooska ah ee dowlda Itoobiya ka wado gudaha Soomaaliya.
Buluugleey Muqdisho, Soomaaliya